Maxaa sababy midab takoorka iyo quudhsiga ina afeeyey? :
☆ MAXA SABABAY MIDAB TAKOORKA IYO QUUDHSIGA?
Dhaqan kan ba’an ee takoorka iyo quudhsiga ah ee aafeyey bulshadeena sababta ugu weyn ee inaku kaliftay in aynu ku kacno waa:
* jahli iyo aqoon la’aan; ma sina qofka aqoonta leh iyo jaahilku, aqoonta diineed waa tixraac iyo hagaha bulshada, qofka garashadiisa iyo garaadkisay kobcisa, waxay ka dhigta qof mid ka xishooda waxyaabo badan, waxay qofka u suura gelisaa inuu meel fog wax ka eego , waxay u jeexda daw hagaagsan, waxay u iftiimisa hab nololeed quman.
* damiir xumo iyo dad nimo la’aan; qofka inta uu damiirkisu nool yahay waxa uu xeeriya waxyabo badan, waxa uu iska dhowra dhaqano xun, waxa uu ilaaliya isku duubnida bulshada, dadnimada wanagsani watan bulshada isku haysa, waa is dhex galka bulshada waa is caawimada iyo is dhexgalka. *wacyi gelin la’aan iyo ka aamusid; dadku ma wada xuma waxa ka buuxa qaar badan oo aqoon iyo garasho leh, lakin nasib darada ina haysata waa inan ka amusnay musiibadan bal xata in aynu inagu taaba gelino oo garab isku siino musibadan halkan dadka af iyo adinba uga wacyi gelin lahayn ulana dagaalami lahayn.
*qabyaalad iyo qaybsanaan; waa qodobka ugu weyn ee sababy takoorka iyo quudhsiga, waxa layaab leh inagoo islaam sheganayna in aynu isugu faano qabiil iyo tiro badnaan, mucjisad qabyaaladu waa waxa umadi Soomaliyeed ka dhigay kuwa aan isku xidhnayn, waa musiibo dhic kasta inaka baa’bi isay.
Tags: midab takoor, qabyaalad, quudhsi
Previous PostDhambaal jacayl (Ubax Q3).
Next PostSaaxibtinimada iyo marxaladeheeda Q2aad
MUHIIMADA CAAFIMAAD EE BIYAHA Q2aad